Gịnị mere Anyị - Mandarin Morning Chinese School
The doro anya na oge ochie asụsụ nke China: Mandarin. Na-ege ntị a Chinese mkparịta ụka bụ dị ka ma ọ bụrụ na okwu ndị ị na-ege ntị, n'out oge na-akpalite a usoro nke obere eserese na-egosi n'ihu unu. Sịkwa, ya Han Zi (Chinese Edemede), odide nke na-niile ewepụtara foto, na-akọ akụkọ nke ha onwe ha! Ndị Chinese odide Structure asụsụ mgbe n'otu oge ekwe maka nnukwu mgbanwe, na-enye gị ike na-egosipụta onwe gị n'ụzọ ziri ezi ma dị ike. Ihe ijuanya na anyị mesie ike mkpa ezigbo ige ntị nkà, dị ka aural nkà amanyere bụ iwu nke na-amụta na-ekwurịta okwu na otú typical Chinese ụzọ.
Anyị na-ụlọ e mere 1-2-3 Learning Cycle n'ụzọ zuru ezu na-amata ndị a na ndị ọzọ na fundamentals nke Chinese asụsụ. Anyị na-amalite irekasị asụsụ eme ka ị na-ahụ ma na-aghọta na isi-ya, na n'otu oge ahụ, anyị dị malite iji ya. Na bụghị na dị ka ị mụtara nne gị ire, ebe iji na-aghọta na-agakọ?
East-ezute Ọdịda Anyanwụ
"Onye Ozizi, ihe bụ l ogic nke Mandarin ? All ndị iwu na ị na-enye m, ha na-eme isi m atụ ogho! Ọ bụrụ na ị nwere ike na- akọwara m ya mgbagha, m ga-aga were were n'ọnụ tupu ị maara! "
Ee, O yiri ka ụzọ izi eji, enweghị ike imeri na ọdịiche dị n'etiti Western (na-abụghị Chinese) si eche echiche na Chinese echiche, n'etiti Western asụsụ na Mandarin. Kama àjà ịghọta, iwu e nyere, na ọbụna ndị ọzọ iwu.
Iji mee ka Mandarin ndụ mfe maka ụmụ akwụkwọ anyị otu wee na a ọhụrụ ụkpụrụ na-akpọ ngwa ngwa Motion Usoro . Ngwa ngwa Motion Usoro n'ezie na-egosi na ị na-ezi uche nke Mandarin, na ndị ọzọ ihe, na-akụzi na ị na Mandarin na dị nnọọ ONE achị kama ọtụtụ, na nke na-amụrụ ga-adịghị otú ahụ?
E nwere ihe ị chọrọ ị maara na mbụ, nke ọma ngwa ngwa Motion Usoro m bụ otu n'ime ha. M olileanya na unu ga na-ahụ ya dị ka na-enye aka dị ka m mere n'oge!
Ọ bụ anyị ozi na-agbasa mara mma Chinese asụsụ site n'ịnapụta anyị na ụmụ akwụkwọ ndị kasị elu ozizi mma o kwere omume, ihe ọ bụla ha na oké ọchịchọ, ndabere ma ọ bụ afọ, na n'ebe ọ bụla ha na-.
Iji-enwe ike ime otú anyị kpọọrọ ndị kasị mma nkụzi na mepụtara anyị pụrụ iche izi echiche, na-ekwenye ekwenye na-arụpụta ihe karịrị-atụ anya.
Dabere na anyị ọhụụ anyị isi atụmatụ ndị dị ka ndị.
Mandarin Morning obibia
2 IN 1 na 2 gbakwunyere 1 Usoro Ọmụmụ
Anyị Usoro Ọmụmụ-eme ka ị nweta gị Mandarin mmụta ihe mgbaru ọsọ, ma n'otu oge na-akwadebe gị ruo Chinese udomo oro
Extra ọmụmụ chọrọ iji kwadebe maka udomo oro
Nkọ Learning, na iji ngwa Motion Usoro
Anyị ngwa Motion Usoro-ekpughe ezi isi nke Mandarin, nke boosts gị mmụta ọsọ oke
The isi nke Mandarin na-adịghị kpughere
Mfe n'isi, na-eji anyị Structure Map
Anyị na-amalite irekasị na Chinese asụsụ n'ime a ọnụ ọgụgụ nke oké mkpa ụlọ nkanka. Nke a na-eme ka ọ dị mfe ịghọta na ya mere mfe icheta ya
N'isi dị nnọọ site na ugboro ugboro
Fun Iji, amama gị Knowledge n'ime Usọ site na otutu ụzọ nke na-eme
Games, music, uri, movies, eme ea. eme ka elu akụkụ dị mkpa nke anyị na usoro, ọ bụghị naanị n'oge anyị ọmụmụ kamakwa anya campus na mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ
Otu ụzọ na-eme: eji naanị akwụkwọ
Etozu ụzọ izi
Mandarin Morning ụzọ izi eji nkụzi nile ka e meere ozizi quality
Ụzọ izi na-adabere na ndị nkụzi: iche iche ndị nkụzi na-eji dị iche iche na usoro
Ịnọgide na usoro ọmụmụ mma
Dabere na-amụrụ 's nzaghachi na ndị nkụzi na-eto eto na ahụmahụ anyị na-mma anyị ọmụmụ iji HAZIE-DO-ego-iwu okirikiri
Ọ dịghị pro-arụsi ọrụ ike usoro ọmụmụ mma
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla banyere anyị na ụlọ akwụkwọ na anyị na omume, pịa bọtịnụ n'okpuru na kpọtụrụ anyị!